RESTBET501 EROL BULUT'TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER - RESTBET501.COM GİRİŞ
RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
November 30, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 10
စူပါလိဂ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ Galatasaray Fenerbahce ၏ဒါဘီနာရီကျန်ရှိနေသည်။ Fenerbahçeနည်းပြ Erol Bulut သည်ဒါဘီပွဲမတိုင်မီရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်စကားများကိုပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီဖလား Galatasaray မှဖြစ်စေ Alanyaspor နည်းပြ Erol Bulut သည်ဆရာဝန်အား Fatih Terim ၏ဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဖလားပြိုင်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်ဖလားပြိုင်ပွဲ ၄ ပွဲ ၁ ပွဲတွင်ဖလားရနိုင်သည့်အိပ်မက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲမစမီ Erol Bulut က “ငါမရှိဘူး၊ ငါတို့ရှိနေတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကအဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောစကားများလည်းပြောခဲ့သည်။ Erol Bulut “အခုအချိန်မှာပုံစံအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကတစ်ဆင့်တက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဘီရဲ့လေထုဟာထူးခြားပါတယ်။ ကစားသမားတွေကဒီပွဲစဉ်တွေကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေရရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြလိမ့်မည်။ ။
RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET501 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET501 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! SULTANBET516 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBABA138 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR
10 Comments on RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
HAKAN November 30, 2020 at 8:40 pm
restbet kayıt kazım üye ol dedi üye oldum mk
ERGÜN December 1, 2020 at 9:30 am
restbet canlı casino ödeme yöntemleri arasında papara olan hızlı bir site.
EMRE December 1, 2020 at 9:10 pm
restbet restbet bölümü bok gibi.
NİHAL December 1, 2020 at 9:50 pm
restbet giriş güven veren önemli bir site.
ANIL December 3, 2020 at 10:50 pm
restbet kayıt kazanabilir miyiz
ÖZGÜR December 5, 2020 at 1:10 pm
restbet kayıt güvenilir bir site öneriyorum kesin üye olun.
GİRAY December 7, 2020 at 5:20 pm
restbet casino canlı bahis siteleri arasında tercih edilen iyi bir site.
ZÜHAL GÜLSÜM December 9, 2020 at 1:40 pm
ŞAHİKA December 10, 2020 at 10:10 pm
restbet giriş misli.kom gibi az oran veriyorlar.
DUMAN December 11, 2020 at 8:10 pm
restbet canlı bahis ödemeleri nası bu sitenin kanıt var mı, memnun olmayan var mı?